Abenzi china XYS Professional wokucoca arhente-CY0818 abavelisi kunye nabathengisi | Xieyanshi
Le mveliso ingumatshini ogqibeleleyo wokujonga isipili esisebenzisa umatshini wokucoca ngesantya esijikelezayo se-1200-2000 rpm. Ngaba ungasusa ngokukhawuleza nangempumelelo zonke iintlobo zamanqaku e-paint yokupenda imoto, ukufezekisa isipili esibonakalayo esihle kakhulu!
XYS-CY-0818 Umatshini wasePoland
I-CY0818 Umatshini wasePoland uyilelwe ukuba asuse ngokukhawuleza nangokufanelekileyo amanqaku e-swirl avela kuzo zonke iintlobo zeepeyinti zeemoto, kwaye avelise isiphelo esiphakamileyo sokuqaqamba. Iqukethe i-waxes okanye i-silicones. Eyona nto ifanelekileyo yokupenda imibala emnyama. Ukucoca okuncinci kuyafuneka.
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ukususa ukudibanisa amanqaku kwi-swirl kuzo zonke Iindidi zokucoca okanye iifektri ezisetyenzisiweyo. Ngamana ungasetyenziselwa ukususa okuhle
imikrwelo kunye neempawu zamavili ezivela kwiipeyinti ezingadingi ukuhlanganiswa. Ukunciphisa ukubakho kwamabala, musa ukusebenzisa kwilanga ngqo okanye kwindawo eshushu.
Sebenzisa nge-buffer yomoya okanye yombane (1000 ukuya ku-2000 rpm) exhotyiswe nge Iphedi yokuPolisha amagwebu.
1. Faka i-glaze eyaneleyo kwindawo yokupenda ukuze usebenze iinyawo ezimbini ngeenyawo ezimbini. Ukunciphisa isilingi, sebenzisa i-glaze ngokukhawuleza kwaye usasaze ngephedi yokupholisa ngaphambi kokuqala umatshini.
2. Qalisa umatshini kunye ne-buff usebenzisa ukukhanya ukuya koxinzelelo oluphakathi.
3. Nciphisa uxinzelelo njengoko i-glaze iqala ukoma kwaye ipolishe kwi-gloss ephezulu.
Qaphela: Ukuba i-glaze isilingi kwipaneli esondeleyo, susa i-glaze spatter kunye nomdaka othambileyo
1.Beka isixa esifanelekileyo seCY-0818 kumphezulu ukuze ukhazimliswe. Sebenzisa ivili lokucoca isiponji ukufaka i-wax ngokulinganayo.
2, qala umatshini wokucoca kunye nevili lokucoca imfunxa ukugcina isantya esifanayo, kwaye ngokuthe ngcembe kuvavanyo loxinzelelo, xa i-wax ngokuthe ngcembe yomile, ukunciphisa uxinzelelo oluqhubekayo lokucoca, de kube umbala wepeyinti ukufezekisa umphumo wesipili
3, emva kokuqhubekeka, sebenzisa ilaphu ukusula intsalela yokupenda ipeyinti!
Egqithileyo Metal wokucoca Compound for Buffing Wheels-XYS-CY0817
Okulandelayo: Emanzi neyomileyo esirhabaxa wokucoca Sandpaper Sheets
Car Care wokucoca Compound simahla iisampulu-XYS-CY ...